Matongerwo eNyika, 18 Mbudzi 2017
Mugovera 18 Mbudzi 2017
Mufaro Mukuru muBulawayo Vanhu Vachifarira Mauto
Mazana nemazana evanhu vapinda mumigwagwa yeBulawayo nhasi mangwanani vachiratidza rutsigiro rwavo kumauto.
Vanhu Vakawanda Vanoti Havachadi Kutungamirwa naVaMugabe
Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muHarare zvichikurudzira mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, kuti vasiye basa.
Mibvunzo Yosimudzwa Kana Mauto Ari Kuita Zviri Pamutemo Pana VaMugabe
Magweta anoona nezvekodzero dzevanhu anoti kusataura pachena kuri kuitwa nemauto kunoita kuti vanhu vasanyatsoziva kana zviri kuitwa zviri pamutema.
Mauto Orumbidzwa Zvichitevera Danho Rawo reKurwisa Huori
Imwe nyanzvi munyaya dzechiuto inoti zviri kuitwa nemauto zvokubata nekuchengetedza vanhu vanofungidzirwa kuti vaita zvehuori, zvinhu zvinotarisirwa munguva yakaita seyakatarisana nenyika.
Vari muSouth Africa Votsigira Kuratidzira Kuri Kuitwa muZimbabwe
Zvizvarwa zveZimbabwezviri muSouth Africa zvinoti zviri kufara zvikuru kuti vanhu vemuZimbabwe vabatana kekutanga vachiramba hutongi hwenutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe.
VaMugabe Voratidzwa Kuti Havachadiwi neVakawanda
Vakarwa muhondo yerusununguko vari kuita musangano wekutenda zvakaitwa nemauto ayo akabvisa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamasimba ekutonga.
Vari Kunze kweNyika Votambira Zvakaitwa neMauto
Zvizvarwa zveku Zimbabwe zvinogara kunze kwenyika zvinoti zviri kufara nezvakaitwa nemauto ayo akabvisa mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, pamatomu zvichiti zvanga zvayaura nekushupwa nehurumende yeZanu PF.
Vakawanda Vanoti Mauto Akagona Kusiya VaMugabe Vachienda kuZimbabwe Open University
Mumwe mugari wemuHarare, VaFarai Mabeza, varumbidza zvakaitwa nemauto vakati kuenda kwaVaMugabe kuZimbabwe Open University, idanho rakanaka kuratidza kuti mutungamiriri wenyika haana kubviswa nechisimba.